Dustwind: chaiyo-nguva nzira vhidhiyo mutambo | Linux Vakapindwa muropa
Dustwind: chaiyo-nguva nzira vhidhiyo mutambo
Dustwind ndeye chaiyo-nguva matekiniki vhidhiyo mutambo kunze kwaizvozvi Zviri kutengeswa (-25% yemutengo) kwechinguva. Haisi yakanangana nepuratifomu yeLinux, asi inogona kushanda pairi nekuda kweValve's Steam Play Proton. Anovandudza uyu mutambo iDustwind Studios, iyo yawana mamakisi akanaka nekuburitswa uku. Zvinotaridza kuti vatambi vari kuifarira uye ikozvino vashandisi veLinux vanozokwanisa kuitamba.
Mutambo wevhidhiyo unobva paUni 3D injini yemifananidzo iri kupa mibairo yakanaka kudaro, uye kuti tinorangarira kuti iri multiplatform. Yakaiswa muKutanga Kuwana kubva munaNovember 2017 uye gare gare mutambo uzere wakaburitswa pachitoro cheStam muna Nyamavhuvhu 2018. Zvisinei, Dustwind ichiri mukusimudzira uye panguva ino hapana chiteshi cheLinux. Asi sekutaura kwandakaita, inogona kuridzwa nekutenda kune chirongwa chakataurwa mundima yapfuura.
Dustwind, kune avo vamusati majairana nayo, yakavakirwa pa post-apocalyptic nhoroondo pasi pano. Inotova nemushandirapamwe mune imwechete-mutambi modhi iyo yavakagadzira uye vari kuzotanga gore rino. Saka isu tichave takamirira ruzivo rwutsva uye zvigadziriso zvinomuka kubva muchirongwa ichi chave pedyo nekugadzwa kwekupedzisira zviri pamutemo. Parizvino, iwe unogona kutamba iri zita neizvo zvaunazvo parizvino uye nekuwana sarudzo yemamepu akavakwa nharaunda.
Unogona kushandisa zvombo zvakasiyana siyana kuti ukunde vavengi vako, kubvisa zviteyeso, kugadzirisa uye kutyaira mota, kushandira pamwe newaunotamba navo, nezvimwe, zvese izvo zvehondo zvenguva chaiyo, zvakare zvichikubvumidza iwe kuti ugadzire maficha matsva, tamba se imbwa, hongu, sembwa, kugona zvakare kuita zvimwe zvezviito zvinogona kuitwa nehunhu hwemunhu, chete kuti unenge uine zvimwe zvombo zvakasiyana ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Dustwind: chaiyo-nguva nzira vhidhiyo mutambo
Sam Hartman we "purezidhendi": Kwete Spain neEurope chete vane sarudzo ... Debian futi
Ubuntu 19.10 ikozvino yave kuwanikwa mune yekutanga Zuva Nezuva kuvaka vhezheni